China Counter-flow Closed Circuit Cooling Towers / Evaporative Closed-circuit Coolers mpanamboatra sy mpamatsy | Yubing
Famaritana ny fahombiazan'ny vokatra
Raha ampitahaina amin'ireo tilikambo fihenan'ny rafitra misokatra, mora kokoa ny mitazona dia endri-javatra miavaka amin'ny fantsom-pifandraisana mikatona mihidy ICE izay safidy tsara indrindra amin'ny rafi-pitabatabana misy tombony hafa manaraka:
► Ahena ny fanjifana rano, mitsitsy fikojakojana angovo sy fitaovana.
► Sorohy ny loza mety hitranga amin'ny fanodikodinam-bola amin'ny fifanakalozana hafanana na toerana mitovy amin'izany.
► Fametrahana mari-pametrahana sy fandaniana lehibe (tsy mila paompy, valves, paipa fanampiny fanampiny sns.)
►Tontolo iainana fampiharana midadasika kokoa - Azo ampiasaina ny fitaovana mikatona mihidy amin'ny hafanana ivelan'ny hatsiaka. Izy io dia be dia be avy amin'ny fitaovana fanodinana indostrialy ka hatramin'ny fitazonana ny mari-pana amin'ny foibe angon-drakitra sy efitrano informatika ka hatramin'ny famokarana simika.
ICE Evaporative counter-flow mikatona ny cooler circuit rafitra 'sy ny singa fototra fampidirana:
Ny tilikambo mitafooka ICE manaparitaka tadin-tsolika mipetaka amin'ny harona dia mijanona tsy mitohy mandritra ny fotoana maharitra ary manome fizarana rano tsy tapaka hanamafisana ny famindrana hafanana eo anelanelan'ny rivotra, rano ary ny tsiranoka fanodinana hampitombo ny fahombiazan'ny fandavana hafanana.
Ireo fantsom-panafody napetraka ao anaty fantsom-pizarana rano tsy misy harafesina ho fanesorana mora foana.
Tube varahina mena
Ny fantsona fototra dia mampihatra varahina mena karazana T2 avo lenta izay novidina tamin'ny mpanamboatra marika malaza hahazoana antoka azo antoka sy azo antoka ny fampitaovana.
Namboarina sy vita amin'ny PVC hampihena ny fahaverezan'ny rano mandritra ny fandidiana lena ary mametra ny tahan'ny haingam-pandeha hampihena ny fanjifana rano ary hisorohana ny refy.
Louver miaraka amin'i Damper
Misy fanalefahana fanaraha-maso hifehezana ny fikorianan'ny rivotra mandritra ny fiasan'ny tilikambo fihenan-tsasatra ampiharina amin'ny rano sasany, ny rafitra paompy hafanana rivotra na ny fizotry ny fampangatsiahana toy izany mba hisorohana ny fahaverezan'ny hafanana mandritra ny fihenan'ny fitaovana indrindra amin'ny toetr'andro mangatsiaka.
Rehefa mihoatra ny 0 ℉ (-18 ℃) ny maripana, miaraka amin'ny heater elektrika dia tsy hidina ambanin'ny 40 ℉ (4.4 ℃) ny mari-pana amin'ny rano. Misy fiarovana ambany amin'ny rano napetraka ao anaty heater mba hahazoana antoka fa hiasa izy io rehefa alentika anaty rano. Ny singa rehetra momba ny heater herinaratra dia napetraka ao anatin'ilay tranga ary ampifanaraho amin'ny hetsika ivelany.
Basin-drano famolavolana slope
Ny volavolan-tehezana (mitongilana mankany amin'ny fivoahan'ny fandotoana ny loto) hialana amin'ny fihenan'ny rano sy ny fantsom-by tsy manara-penitra dia hanatsara ny fiakaran'ny rano sy ny fandotoana ny loto miaraka amin'ny fanadiovana ireo loto sy loto ao anaty tavy.
Ny tilikambo fihenan-tsakafo ICE dia mampiasa ny ravina vy mifono vy manohitra ny harafesina izay misy ny zinc ho mpiorina lehibe indrindra, miaraka amin'ny Al, Mg ary silikika marobe. Ny ain'ny serivisy dia 3 ~ 6 fotoana lava kokoa raha oharina amin'ny ravina vy zinc aluminized mahazatra ary ny endri-fanoherana ny hafanana sy ny fanoherana hafanana dia tsara ihany koa.
Previous: Towers fanamafisana mihodina mihombo-mikoriana miampita / fantsom-pifamoivoizana mihidy
Manaraka: Rafitra fanefitra simika ICE ho an'ny fitsaboana rano amin'ny rafitra Tower Cooling
Parameter teknika an'ny Counter-flow Closed-circuit Cooling Tower
Supply habe fantsona
Fiasan'ny tsindry miasa
Tilikambo fihenan'ny faritra mihidy